မလေးရှားနိုငျငံမှ ၂၀၂၀ ခုနှဈအတှကျ Esports ဘတျဂကျြ ရငျးဂဈ သနျး (၂၀) (ဒျေါလာ ၄.၈ သနျးခနျ့) လြှာထားခွငျးခံရ – Gaming Noodle
မလေးရှားအစိုးရဟာ နိုငျငံရဲ့ အီလကျထရောနဈအားကစားထှနျးကားလာရေးအတှကျ အစှမျးကုနျ ကွိုးပမျးလကျြရှိပါတယျ။ ယခုလညျး ၂၀၂၀ ခုနှဈအတှကျ Esports ဘတျဂကျြငှေ ရငျးဂဈ သနျး (၂၀) (အမရေိကနျဒျေါလာ ၄. ၈သနျး) (မွနျမာကပျြငှေ သိနျးပေါငျး ၇သောငျး၃ထောငျ ကြျော) သုံးစှဲနိုငျရနျ လြှာထားကွောငျးကို မလေးရှားဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး Lim Guan Eng က အတညျပွုပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
မလေးရှားဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး Lim Guan Eng
ဒီအကွောငျးကို မကွာသေးမီက မလေးရှားပါလီမနျအတှငျးမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ Malaysia Budget 2020 မှာ ပွောကွားသှားခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမျးမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမယျ့ ပွိုငျပှဲဝငျမြား အောငျနိုငျရေးအတှကျလညျး Lim Guan Eng က ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးခဲ့ပါသေးတယျ။
၂၀၂၀ အတှငျး မလေးရှား Esports ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနဲ့ ပွိုငျပှဲကငျြးပရေးတို့အတှကျ အစိုးရက ထုတျပေးတဲ့ ဘတျဂကျြငှကေို အသုံးပွုပွီး ဆောငျရှကျနိုငျကွမှာပါ။ မလေးရှားနိုငျငံရဲ့ နရှေငျနယျ Esports လိဂျ (Malaysia’s National Esports League) ကို ၂၀၂၀ က စပွီး ကငျြးပမှာ ဖွဈကွောငျးကိုလညျး မကွာသေးမီက ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ယခုကွညောခကျြကိုတော့ မလေးရှား လူငယျရေးရာနဲ့ အားကစားဝနျကွီး Syed Saddiq က ပွောကွားသှားခဲ့တာပါ။
မလေးရှား လူငယျရေးရာနဲ့ အားကစားဝနျကွီး Syed Saddiq
လိဂျပှဲစဉျတဈလြှောကျမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမယျ့ ကစားသမားမြားကို စှမျးဆောငျခကျြအပျေါ မူတညျပွီး အဆငျ့မြား ခှဲခွားသတျမှတျထားမှာပါ။ ဒီလိုအဆငျ့မြားခှဲခွားသတျမှတျထားခွငျးအားဖွငျ့ နိုငျငံကိုယျစားပွု လကျရှေးစငျကစားသမားမြားကို ရှေးထုတျနိုငျမှာဖွဈသလို ဆီးဂိမျး (South East Asian Games) မြားမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျဖို့လညျး အထောကျအကူပွုမှာပါ။
မလေးရှားနိုငျငံရဲ့ Esports ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ အခွားအစီအစဉျမြားကိုလညျး Syed Saddiq က ပွောကွားခဲ့ပွီး ယငျးတို့ထဲမှာ နိုငျငံတဈဝှမျး Esports လကေ့ငျြ့ရေးစခနျးမြား ဖှငျ့လှဈမယျ့ အစီအစဉျလညျး ပါဝငျပါတယျ။ လာမယျ့ Sukan Malaysia 2020 (SUKMA 2020) မှာ Esports ကို ထညျ့သှငျးဖို့ Johor Sports Council က ဆုံးဖွတျထားတဲ့အကွောငျးကိုလညျး ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
Syed Saddiq ဟာ မလေးရှားနိုငျငံရဲ့ ဝနျကွီးတဈဦးဖွဈပမေယျ့ အသကျ ၂၆ နှဈသာ ရှိသေးတဲ့ လူငယျတဈဦးပါ။ နိုငျငံရဲ့ Esports ကိစ်စရပျမြားကို အလေးပေးဆောငျရှကျသူတဈဦးဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ကငျြးပခဲ့တဲ့ Dota2ရဲ့ Kuala Lumpa Major 2018 ကိုလညျး ကိုယျတိုငျတကျရောကျခဲ့ပါတယျ။
နရှေငျနယျ Esports လိဂျ နဲ့ SUKMA 2020 ပှဲစဉျမြားမှာ ထညျ့သှငျးယှဉျပွိုငျစမေယျ့ ဂိမျးမြားကိုတော့ ယခုအခြိနျထိ ထုတျဖျောပွောကွားခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိမှာ ခတျေစားနတေဲ့ Dota 2, Tekken7နဲ့ FIFA တို့ ပါဝငျမယျလို့ ကြှမျးကငျြသူမြားက ခနျ့မှနျးကွပါတယျ။
လာမယျ့ ဒီဇငျဘာလအတှငျး ဖိလဈပိုငျနိုငျငံမှာ ကငျြးပမယျ့ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမျးမှာ Esports ကို ထညျ့သှငျးယှဉျပွိုငျစမှောဖွဈကွောငျး ကွညောခဲ့ပွီးနောကျ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံမြားရဲ့ Esports ဖှံ့ဖွိုးရေးကွိုးပမျးမှုမြားဟာ ပိုမိုမြားပွားလာခဲ့ပါတယျ။ အခြိနျနဲ့အမြှတိုးတကျနတေဲ့ Esports လောကမှာ ပွငျဆငျမှုရှိတဲ့ ခတျေမီနိုငျငံမြားကတော့ ကမ်ဘာမှာ ရငျဘောငျတနျးနိုငျကွမှာပဲဖွဈပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
Source: malaymail.com, lowyat.net
မလေးရှားနိုင်ငံမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် Esports ဘတ်ဂျက် ရင်းဂစ် သန်း (၂၀) (ဒေါ်လာ ၄.၈ သန်းခန့်) လျှာထားခြင်းခံရ
မလေးရှားအစိုးရဟာ နိုင်ငံရဲ့ အီလက်ထရောနစ်အားကစားထွန်းကားလာရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ ယခုလည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် Esports ဘတ်ဂျက်ငွေ ရင်းဂစ် သန်း (၂၀) (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄. ၈သန်း) (မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်းပေါင်း ၇သောင်း၃ထောင် ကျော်) သုံးစွဲနိုင်ရန် လျှာထားကြောင်းကို မလေးရှားဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Lim Guan Eng က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှားဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Lim Guan Eng
ဒီအကြောင်းကို မကြာသေးမီက မလေးရှားပါလီမန်အတွင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Malaysia Budget 2020 မှာ ပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ်းမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပြိုင်ပွဲဝင်များ အောင်နိုင်ရေးအတွက်လည်း Lim Guan Eng က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
၂၀၂၀ အတွင်း မလေးရှား Esports ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးတို့အတွက် အစိုးရက ထုတ်ပေးတဲ့ ဘတ်ဂျက်ငွေကို အသုံးပြုပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာပါ။ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ နေရှင်နယ် Esports လိဂ် (Malaysia’s National Esports League) ကို ၂၀၂၀ က စပြီး ကျင်းပမှာ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ယခုကြေညာချက်ကိုတော့ မလေးရှား လူငယ်ရေးရာနဲ့ အားကစားဝန်ကြီး Syed Saddiq က ပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။
မလေးရှား လူငယ်ရေးရာနဲ့ အားကစားဝန်ကြီး Syed Saddiq
လိဂ်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ကစားသမားများကို စွမ်းဆောင်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး အဆင့်များ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားမှာပါ။ ဒီလိုအဆင့်များခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံကိုယ်စားပြု လက်ရွေးစင်ကစားသမားများကို ရွေးထုတ်နိုင်မှာဖြစ်သလို ဆီးဂိမ်း (South East Asian Games) များမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လည်း အထောက်အကူပြုမှာပါ။
မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ Esports ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်း Syed Saddiq က ပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းတို့ထဲမှာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း Esports လေ့ကျင့်ရေးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်မယ့် အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ လာမယ့် Sukan Malaysia 2020 (SUKMA 2020) မှာ Esports ကို ထည့်သွင်းဖို့ Johor Sports Council က ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Syed Saddiq ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် အသက် ၂၆ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးပါ။ နိုင်ငံရဲ့ Esports ကိစ္စရပ်များကို အလေးပေးဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Dota2ရဲ့ Kuala Lumpa Major 2018 ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
နေရှင်နယ် Esports လိဂ် နဲ့ SUKMA 2020 ပွဲစဉ်များမှာ ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်စေမယ့် ဂိမ်းများကိုတော့ ယခုအချိန်ထိ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Dota 2, Tekken7နဲ့ FIFA တို့ ပါဝင်မယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ်းမှာ Esports ကို ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်စေမှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရဲ့ Esports ဖွံ့ဖြိုးရေးကြိုးပမ်းမှုများဟာ ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမျှတိုးတက်နေတဲ့ Esports လောကမှာ ပြင်ဆင်မှုရှိတဲ့ ခေတ်မီနိုင်ငံများကတော့ ကမ္ဘာမှာ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။